SHEEKO XIISO BADAN:Hooyo Maxaad Ii Dhalaysay? | Somaliland Today
← EBOLA !!! AAFADA JAADKA, OROMADA SUNSUMAYSA IYO XUDUUDAHA OODA LA.
“Sidan Haday Ku Socoto Dalka Wada Yeelan Mayne Waynu Kala Yeelanaynaa”. Xasan Guure →
SHEEKO XIISO BADAN:Hooyo Maxaad Ii Dhalaysay?
Waxa uu ahaa mid ay ka muuqato diif oo aad moodo inaan sanado loo maydhin wax jal ahna la siin, Talow ma rajay iyo agoonba ayay dadku is waydiiyaan karya arkaan, waxa uu ku labisanyahay garan yar oo cawlan iyo surwal Jeans ah oo dildilaacsan.
Waa dibad meer aan cidna ka baqan meelna ka waaban Baakidho sigaar ah iyo geedo jaad ahna ku tagaan maalin walba.
Waxa uu gariga ku soo laabtaa isaga oo la soo dilay ama se wax soo dilay , waxa uu kaligii kula noolyahay hooyadii iyo laba hadlood oo ay walaalo yihiin gurri aad moodo qasri oo aad u qurux badan se aanad moodayn ama u quudhayn inuu isagu galo, xaafada isagaa ugu wayn oo curadkii ah, school waa loogu taagi waayay waxbarasho kalena hadalkeeda daa.
Da’diisu waa 13 laakiin aad moodo 10 jir, waayo waxba ma cuno jidhkiisiina koritaankiiba ku yaraaday.
Aabihii waxa uu ku maqanyaha magaalo kale oo uu u xoogsi tagay sidii uu carruurtiisa noloshooda u kafayn lahaa, waxaana uu masuuliyadii daryeel iyo kobcin wada saaray hooyadood,Biilka waa uu u soo diraa, sanadkiina maalinbuu imaada.
Habeenkii waxa uu ka yari soo hoydaa saq badhka waa qalqaali faraha lagaga gubtay, intaa waxa u dheer Inamo yaryar oo kale oo ay is raacaan si ay dadka u dhacaan mobiladana uga xafaan, waxa khaatiyaan ka taagan magaaladii oo habeen hadduu nabad qab ku seexdo gurigooda habeenka kale Saldhiguu u hoydaa.
Waa faraha laga qaad cid walba karahday oo caan ka noqday magaalada, hooyadii faraha ayay kaga gubatay oo ammaan ay hesho daayoo noloshuuba ku cidhiidhyay, maalinta uu waayo Sigaar iyo Qaadna gabal baas ayaa u dhacay hooyadii oo qasab ayuu kaga qaadi jiray waxoogaaga yare e biilka ah ee ay xaafada u hayso.
Aabihiina afarata cisho ee uu joogo masajidka kama baxo oo waa qof toosan, hadana marka uu noqdo ayuunbuu halkii ka bilaabaa.
Saldhigyada Magaalada waxa uu ka noqday caan oo askari kastaa wuu yaqaanaa waxaanu ku jiraa liiska qamaamuurta waawayn ee wax dhacda
Jidh dilka lagula kaco marka uu wax dhaco ma damqo oo warba kama hayo inay nabaro soo gaadheen, jidhkiisu meel fartaas la saaro malaha oo argagaxbaa kugu dhacaya hadaad aragto waxa nabar ku yaala.
Waxa uu la saaxiibyahay afar kale oo noociisa oo kale ah oo ay isku mabda’a yihiin, Mar walba waxay hooyadii ku tawaawacda habaarkani halkuu kaga dhacay wiilkayga se maxaa sababay inuu isaga oo wanaagsan noqdo mar kaliya dibjir?
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadh ay saaxiibyihiin u timid kii yaraa hooyadii waxaanay waydiisay waxa ku dhacay wiilkeedii ee uu u noqday qof dadkii khaatiyaan ka istaageen oo dhac iyo booba yaqaan kuna walfay balwadaas.
Waxay ugu jawabtay iyada oo murugyasan “ Wiilkayga anigaa baday dhibtaas uu qabo iyo taa uu dadka iyo anigabe noo gaysanayo maantaanan gartay khaladkaas aan galay”
Gabadhii ayaa iyada oo yaaban ayay hadana waydiisay “oo maxaad adigu sabab ugu noqotay?”
Waxay ku bilowday sheekada sidatan iyada oo murugo wajigeeda ka muuqato:-
“ Inankaygu waxa uu ahaa qof toosan oo aan xumaan u dhawaan dadka xun xuna raacin, sidaas ayaanu ku barbaaray ilaa uu gaadhayay 6 jirkiisii.
Maalintii uu lix jir gaadhay ayaa uu Aabihii ka helay shaqo magaalo kale deetana waa uu tagay, waxaana markii uu tagayay igula sii dardaarmay inaan ilaaliyo Akhlaqda iyo koriinka carruurta dayeelkoodana ka adkaado, Laakiin waan iska dhagatiray taas waana uu anba baxay, Biilka ayuu noo soo diri jiray bil kasta dhawrkii biloodna todobaad ayuu soo fasax qaadan jiray si uu noola soo joogo warna nooga soo helo
Wiilkaygani waxa uu dhigan jiray Madarasad Quraan iyo School waxaana uu ahaa qof ku wanagsan kuna dadaala dhanka tacliinta, marka uu waqti firaaqo ah helana waxa uu daawan jiray TV-ga meelna umuu bixi jirin.
Deetana markii uu gaadhay 7 jir ee uu Aabihiina naga maqnaa ilaa sanad ayaan bilaabay inaan daawado filimaanta musalsalka ah, maan danayn jirin isaga manaana siin jirin waqti uu igula hadlo iguna waydiiyo waxa uu u baahanyahay manaan daryeeli jirin oo farahaan ka qaaday,
TV-ga hadduu is yidhaahdo daawana indhahaan ku dhufan jiray oo dibada ayaan aqalka uga saari jiray, waxanan ku odhan jiray orod qayrka raac waayo waxaan rabay inaanu iga mashquulin filimaantan aan daawado ee musalsalka ah.
Marka aan dhamaysto filimaantaydana waan iska seexan jiray oo warba kamaan hayn jirin waxa uu qabanayo iyo xilliga oo soo hoyanayo iyo cida uu raacayo.
Nasiib darro waxa uu inankaygii la qabsaday dibad meerkii aan habeenkii is odhan jiray iskaga madadaali intaad dhamaysanayso filimaanta laakiin dhibtuba waxay ka bilaabmataya xagaas oo xadhkaha ayuu goostay oo wiilal iyaguna budhcad ah oo dadka baadha ayuu la saaxiibay oo uu raaci jiray habeenkii.
sidaasna farahayga ayuu kaga baxay ilaa uu soo gaadhayay heerkan uu imika taaganyahay, Aabihii umaan sheegi jirin marka uu noo imaado ee waan ka qarin jiray si aanu isna ii sheegin inaan daawado filimaan oo aan kaga jeestay daryeelkoodii.”
Markay sheekada halkaas marinaysay ayay baroor qabsatay iyada oo ka maroora dilacsan khaladka ay samaysay, Gabadhii saaxiibadeed ahayd way aamusisay waxaanay u dajisay niyada.
Iyaga oo sidii u fadhiya guriga oo aan ka kicin qolkay wada fadhiyeen ayuu soo galay wiilkeedii oo ilmaynaya isaguna, Shaw waxaabu dhagaysanayay sheekadan dhex martay hooyadii iyo gabadha kale.
Waxa uu isaga oo qaylinaya ku dhawaaqay hooyo adiga ayaa xagaas I dhigay adiga ayaa I dilay dhaqankaygiina lumiyay daryeelkaygiina dayacay waajibkaagii aan kugu lahaana gudan waayay oo ka gaabiyey, ee hooyo maxaad ii dhalaysay hadaad sidaas oo dhan ii dayacayso?
Hooyadii intay kor u kacday oo ay gacanta soo qabatay wiilkeedii ayay madaxa ka dhunkatay oo ay tidhi “ Hooyo waan ku jeclahay laakiin khalad wayn ayaan kaa galay ee I saamax aniga ku qaloociyee, imikana diyaarbaan kuula ahay wax kasta oo wanaag ah oo aad rabto xumaantana ka dhex bax.”
Wiilkii waxa uu ugu jawaabay “waayahay hooyo” waxaana uu u balan qaaday inaanu isna ku kici doonin fal danbe sidaasna danihiisa uu ku raaci doono oo aanu cid xun oo danbe raaci doonin talaabana la wadaagi doonin.
( Maah-maah soomaali ah ayaa waxay tidhaa Haani guntay ka tolontaa)
Waxaan uga jeedaa taas Ilmuhu marka uu yaryahay hadduu koriinka daryeel ka xumaado isna waa uu qaloocda, waxyaabo badan oo aan la moodayn inay mustaqbalka carrurta mugdi galin karaan ayaa jira oo aanay ka war qabin waalidiintu gaar ahaan hooyooyinkan casrigan danbe jira”.